Amathiphu Awusizo Ohambo - World Tourism Portal
Ukuhamba kugcwele izinqumo ezinkulu - njengokuthi ngivakashelwa yiliphi izwe, ukuthi uzosebenzisa malini nokuthi uzoyeka nini ukulinda bese ekugcineni wenze leso sinqumo esibaluleke kakhulu sokuhambisa amathikithi. Nawa amanye amathiphu alula wokuthoba indlela eholidini lakho elilandelayo. Kepha ngale kwesithombe esikhulu, yizinto ezincane ezingenza uhambo lube lula futhi lungabi nzima kakhulu.
Ukwebiwa kanye Nemikhawulo
Isigaba sokuhlela sohambo lwakho singaba nethonya empumelelweni yaso futhi sibe yingxenye emnandi yesipiliyoni uqobo. Unomhlaba wokukhetha ... nokuningi ongakucabangela.
Ngaphambi kokuthi Uhambe Uhlu Lokuhlola
Ukuthola Imibhalo Yakho Yokuhamba Ndawonye
Ngabe ngidinga umshuwalense wokuhamba?
Amathiphu wokuhamba ngeSolo
Amathiphu wokuhamba nezingane
Ukusizakala Kohambo Lakho
Ukuthola ukuthi ungazungeza kanjani kungenye yezinqumo zakho ezinkulu zangaphambi kohambo.
Amabhasi Ahamba Ibanga elide
Qasha Imoto noma Thatha Isitimela?
Ohambweni lwakho uzohlangana nezinhlobo ezimbili zabahambi: labo abapakisha ukukhanya nalabo abafisa babenabo.
Izeluleko Zokukhetha Isikhwama Sokuhamba Esihamba Phambili
Sebenzisa imali yakho ngobuhlakani. Iseluleko ngesikhathi esihle sokusebenzisa ukheshi noma ikhadi nokuthi ungakugwema kanjani ukukhokha imali ngokungadingekile nganoma iyiphi indlela.
Khokha ngePulasitiki noma Cash?
Amathiphu Wokuphepha Amakhadi Wasebhange Abahambi
Amathiphu wokusebenzisa ama-ATM
Izingcingo namanye amadivaysi ahlakaniphile angaba isikhathi esikhulu sokugcina… noma izithikamezo ezibizayo. Amathiphu wokwenza ubuchwepheshe obuhle kakhulu ohambweni lwakho, nasekhaya noma ngefoni yakho uqobo.
Ukungahambi kahle kukuthandela ukujabulela uhambo oluphephile futhi olungenazigameko. Thuthukisa amathuba akho ngokuthatha izinyathelo zokuphepha ezivamile.
Amaphakethe okugqamisa kanye namasela
Ukuhamba ngebhande Lemali: Yakho Ephephile Iphephile
Imikhakha Yabavakashi kanye nama-Rip-Offs
Izinketho zakho zokudlela kungaba yindaba yobuso ... noma zinganikeza amathuba acebile wokuxhumana nabanye namasiko abo.
Thatha induduzo: Odokotela, izibhedlela, izindwangu zokugeza, kanye nezindlu zokugezela akuhlukile kwezinye izindawo. Ukusebenzelana nabo kungaba yingxenye yobumnandi bokuhamba.
Uma ususemhlabeni injabulo yangempela iqala… kodwa kuyakhokhela ukuba nohlelo olucabangayo. Lezi zikhomba zizokusiza ukuthi uqondise lapho okuzungezile, usebenzise amahora akho okubonwa ngokuhlakanipha, futhi uthole indlela yakho yokushaywa.
Ungakugwema Kanjani Imigqa Kanye Nezxuku
Amasu Okubona Ngokuqonda
Amathiphu Wokujabulela indawo kuHambo Olukhulu lwebhasi
Tags: amathiphu wokuhamba awusizo
Umbhali weposi:World Tourism Portal Umhleli
Iposwe ishicilelwe:August 15, 2019